Ross Barkley Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Ross Barkley Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
Taariikhda Nolosha ee Ross Barkley waxay soo bandhigaysaa warbixin buuxda oo kusaabsan Taariikhdiisa Carruurnimada, Nolosha Hore, Waalidiinta, Qoyska, Gabadha / Xaaska, Nolosha Qofka iyo Noloshaada. Waxaan ku siinaynaa falanqeyn buuxda oo ku saabsan dhacdooyinka caanka ah oo ka soo bilaabanaya maalmihiisii ​​hore ilaa markii uu caan noqday.
Taariikh nololeedka Ross Barkley. : Instagram.
Haa, waa xaqiiqo la ogsoon yahay in ciyaaryahanka khadka dhexe uu yahay ciyaaryahan laba lugood leh oo leh farsamo aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, inta badan waxa aan si wanaagsan loo aqoonin waxay ku jiraan biokan. Iyadoo aan la sii amba qaadin, aynu bilowno.
Sheekada Carruurnimada Ross Barkley:
Ross Barkley wuxuu ku dhashay maalinta 5aad ee Diseembar 1993 magaalada Liverpool, Boqortooyada Ingiriiska. Isagu waa Sagittarius dhalasho ahaan. Wuxuu ku dhashay aabe reer Nigeria ah, Peter Effanga oo injineer ka ah baabuurta iyo hooyo Ingriis ah, Diane Barkley (hayaha guriga).
Mid ka mid ah sawir caruurnimadi hore ee caan ah ee Ross Barkley. : Instagram.
Ross, halkii laga jawaabi lahaa Doodwanaag wuxuu doortay inuu ka jawaabo magaciisa hooyadiis 'Barkley'Xiriir xumadii uu kala dhaxeeyey aabihiis reer Nigeria intii uu sii koray. Ross wuxuu bilaabay inuu ciyaaro kubada cagta isagoo uga mahadcelinaya dadaalka aabihiis ee sida muhaajiriinta ah, u suurta geliyay dhaxalka kaliya ee inuu kubada cagta ka dhigo xirfadiisa ugu faa’iidada badan.
Sidee Kubadda Xirfaddu u Bilaabantay Ross Barkley:
Tani waxay sidoo kale ahayd kiisaska waalidiinta soogalootiga ah ee ku nool Yurub. Waaliddiinta Leroy Sane, Mesut Ozil, Christian Benteke iwm waa ka-faa'iideystayaal waaweyn. Iyada oo loo marayo Peter Effanga aabihiis, Ross ayaa ku soo biiray Everton wuxuu bilaabay kubbadda cagta markii uu ahaa da'da 11. Wuxuu ka gudbey ilaa Evertonian nidaamka dhalinyarada.
Sawirka Ross Barkley dhawr sano kadib markii uu ku soo biiray kooxda Everton. : Instagram.
Sanadihii Hore ee Kubadda Cagta ee Ross Barkley:
Marka laga reebo inuu cinwaan ka dhigto isagoo da 'yar, Ross waxaa lagu yaqaanay inuu leeyahay hoormoonka korniinka iyo hiddo-wadaha taasoo ka dhigtay inuu ka weynaado asxaabtiisa iyo xitaa kuwa ka soo horjeedda sida sawirka hoose ka muuqda.
Ross Barkley aad ayuu u weynaa oo qof ayaa u maleyn lahaa inuu ku ciyaarayay da 'da'da khaldan. : Instagram.
Romelu Lukaku sidoo kale goob joog u ahaa isla koritaanka cudurka. Xaqiiqdii, markii uu ahaa 15, Ross wuxuu horeyba ugulaabanayay dhinaca ka hooseeya 18 jirka. Tani waxay sabab u tahay jidhkiisa xad-dhaafka ah.
Ross Barkley's Rise to Fame Sheeko:
Dhawr jeer, wuxuu ku hogaamiyay kooxdiisii ​​dhalinyarada guulaha waaweyn iyo hanashada koobabka waaweyn sida “Echo Cup” oo uu soo bandhigay tababarihi hore ee Liverpool. Rafa Benitez.
Eeg cidda u horseeday kooxdiisa da 'yarta guulihii waaweynaa. : ESPN.
Barkley ayaa la filayay inuu kulankiisii ​​ugu horeysay u safto Toffees xilli ciyaareedkii hore ee xilli ciyaareedkii 2010-2011, lakiin dib ayaa loo dhigay ka dib markii uu dhaawac lugta ah soo gaaray. Waxa uu isku dhacey Liverpool Andre Wisdom halka uu xilka hayo ee England Under-19.
Bishii Diseembar 2011, wax yar ka dib markii 18 uu ku biiray, wuxuu saxiixay heshiis cusub oo muddo dheer ah Everton. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Xiriirka Nolosha ee Ross Barkley:
Nasiib daro Ross Barkley waxaa loo yaqaanaa inuu yahay midka ugu nabdoon, wax ku ool ah, macquul ah, xaqiiqda iyo inta badan Waaliga mas'uulka ah, Wag iyo xaaskiisa la qoondeeyay. Mana aha qof kale marka loo eego Zoe Riozzi.
Laga yaabee inaad wayddiisay…, maxaan sidan ugu amaannay?…. Sababaha ayaa ah sida soo socota; Zoe Riozzi waa qof aad u hooseeya. Muuqaalkeeda cimaamadda leh ayaa u muuqda dhammaan. Waxay jeceshahay inay gashato jaakad jilicsan oo Parka ah dharkeeda dharka iyo kabaha fadhida halkii ay ka ahaan lahayd dilaa ciribtirida sida ay qaar kamid ah xaaskiisa iyo saaxiibkeed u labisan lahaayeen.
Miyaanay ahayn naag fudud? : DailyMail.
Waxay caan ku noqotay nolosheeda-dhulka-markii-ugu-horreeyay markay bilawday shukaansi Ross inta lagu jiray sannadihii dhallinta yar-yar. Waxay mas'uul ka tahay oo ixtiraam u haysaa cagaha Barkley dhulka. Waxay leedahay awood xoog badan ninka reer England. Si ka duwan inta badan kubada cagta WAGS, Zoe ma xiiseyneyso agabka waxyaabaha sida lacagta iyo caannimada. Xaqiiqdii, iyadu waa £ 9 saacad macalin dugsi xanaano.
In kasta oo saaxiibbadeed ay ku dhowaatay raadkii uu dhowaan ka helay saaxiibkiis iyo £ 40,000 toddobaadkii mushahar kaas oo loo qorsheeyay in uu dhowaan soo kiciyo, Zoe wuxuu doortay in uu wado baabuurka ugu naxdinta badan ee weligiis kaxayn lahaa. Halkii Bentleys iyo Range Rovers badankood ee wags ay u isticmaali lahaayeen in ay hareereeyaan, Miss Zoe Riozzi waxay dooratay in ay gadaal ka riixdo nooca Fiat 500 ee fudud. Waxay wadataa furaha hoose ee Fiat500 kaas oo ku kacaya kaliya £ 4,000.
Waa maxay qaab nololeed dhexdhexaad ah : DailyMail.
Nolosheeda nolosheeda waxay la mid tahay tan Wayne RooneyXaaskiisa, Coleen Rooney oo lagu qiimeeyaa inay marwalba sii fiirineyso xulka England. Waxaad Zoe ka qoto dheer tahay Coleen marka loo eego shakhsiyaddeeda hoose-dhulka. Lamaanahan, oo labadaba isku da 'ah, waxay ka soo wada jeedaan isla Liverpool waxayna saaxiibbada yiraahdeen xiriirkoodu waa 'aad u xoog badan'.
Xaqiiqdii, xidhiidhkoodu wuxuu ka baxay xoog-xoog. Labada jaceyl ayaa jecel inay booqdaan Buckingham Palace iyo Dubai. Hal goob fasax ah oo ku taal barta twitter-ka ee Zoe ayaa ku tusaysa barkad ku taal nasashada qoraxda. Waxay ka muuqatay quruxbadan halkan.
Ross Barkley waxaa lagu sawiray halkan isagoo leh taariikh leh Zoe. : Twitter.
Ross Barkley Nolosha Qoyska:
Haa, sida la yaabay sida aad noqon kartaa, tani waa run. Ross Barkley wuxuu ka mid yahay Reer Nigeria.
Xitaa awoowayaashiisu waa reer Nayjeeriya. Sida oo kale Dele Alli, Barkley ayaa diiday inuu u ciyaaro Nigeria. Wuxuu uqalmaa inuu u soo baxo Super Eagles ka hor inta uusan kulankiisii ​​ugu horeysay u safan xulka England ee 2013.
Ka hor inta uusan kulankiisii ​​ugu horeysay u safan xulka Moldova kulan ka tirsanaa isreebreebka Koobka Adduunka, Ross ayaa mar uu sheegay in Nigeria ay ka mid tahay dalalka uu ka soo horjeedo England. Labada aabbihiis, Engineer Peter Effanga iyo hooyadiis, Diane Barkley ayaa weli ku nool Liverpool.
Xaqiiqda Qofka ee Ross Barkley:
Ross waa Sagittarius by dhalashada. Wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee ku saabsan shakhsigiisa.
Barkley: Caqli, dareen wanaagsan iyo dareen weyn oo sharaf leh.
Ross Barkley Tabar-darrada: Ballanqaadka wax badan oo ka soo bixi kara, oo aan dulqaad lahayn, wuxuu sheegi doonaa wax kasta oo aan loo baahneyn sida jajabnaanta.
Waa qof bini aadam ah qaybtiisa cadaalad ah ee xoog iyo daciifnimo. : Goolka.
Maxaa Ross Barkley uu jecelyahay: Xorriyadda, safarka, falsafadda iyo dibadda.
Maxaa ka mid ah Ross Barkley? Dadka dabiiciga ah, oo ah xannibaadyo iyo dabeecado ka baxsan.
Xaqiiqda Taariikhda Ross Barkley - The Great Punch:
Muuqaal cabsi leh ayaa hal mar soo baxay oo muujinaya Ross Barkley in lagu garaacay meel xun oo barootiin ah. Waxaa lagu feeray qeybta wejiga kahor intuuna dhulka ku dhicin. Qareenka Barkley wuxuu yiri waa dhibane a "Weerar aan loo baahnayn oo ay soo qaadeen qof qalaad ah oo u soo dhawaaday".
Weerarku wuxuu ka dhacay barxadda Santa Chupitos ee magaalada Liverpool ee bartamaheeda hore ee subaxnimadii hore. Waxay timid saacado ka dib markii kooxdiisa ay ku guuleysatay 4-2 oo ka dhacday Leicester City oo ku taal Goodison Park.
Xaqiiqda Taariikhda Ross Barkley - Dhibanaha Midabtakoorka:
In kasta oo aad caddaan tahay, waalidkaa ama Ayeeyadaa ka soo jeeda Afrika ma dambi baa? Everton mar horay looga mamnuucay wargeyska The Sun ee ka soo baxa maqaal ku saabsan maqaal ku saabsan Ross Barkley taas oo cambaareeyay calaamado "Cunsuri".
Columnist Kelvin MacKenzie marka la barbardhigo Barkley, oo awoowe ka ah Nigeria, a "Gorillas at the zoo" waxaana uu sheegay in dadka kale ee ku nool Liverpool ay dakhligooda yihiin iibiyeyaasha daroogada.
Wuxuu mar cunsurinimo kula kacay nin columnist ah. : TheSun.
Maqaalkani waa mid sarreeya "Waa sababta Sababta ay u raacaan Rossi" oo ay la socdaan sawirada Barkley iyo Gorilla.
Markii uu arkayay daabacaadan, duqa magaalada Liverpool Joe Anderson ayaa u warramay booliska iyo Ururka Saxafiyiinta Madaxa Bannaan ee Madaxa Banaan "Cunsuriyad iyo weerar". Wargeyska The Sun ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa ku sheegay hadal uu soo dhigay MacKenzie "Ayaa la hakiyay saameyn degdeg ah".
Xaqiiqda Taariikhda Ross Barkley - Chelsea Snub:
Ross ayaa mar kale ku soo biiray Stamford Bridge, laakiin waxa uu sameeyay qaab ciyaareed cajiib ah oo uu u soo bandhigay maalintii ugu danbeysay ee dhamaadka xilli ciyaareedkii dhamaaday si uu u dhameysto suuqa kala iibsiga ee Chelsea.
Antonio Conte ka dib markii lagu soo waramayay in Ross Barkley uu diiday inuu u dhaqaaqo Chelsea ka dib markii warar soo baxayay uu soo jeediyay in xiddiga heerka caalami ee dalka England uu ka tagay heshiiskii sababtoo ah isaga oo aan awoodin inuu gaaro Antonio Conte telefoonka.
Warbixinta ayaa sheegtay Antonio Conte Taleefankiisa ayaa dansan ama waxaa la faray amar ah inuusan lahadlin 23 jirka. Halka story ayaa beeniyay inuu ahaa kiiska, isaga oo ujeedkiisu ahaa inuu digtoonaad ka helo Barkley isagoo aan saxiixin. In uu erayada ...
“Haddii ciyaaryahan kasta uu leeyahay hamigiisa weyn inuu u ciyaaro koox weyn, waa uu saxiixaa. Mararka qaar waa muhiim in maareeyuhu la hadlo ciyaartoy inta uusan saxeexin. Waqtiyada kale maahan. Waxaan la soo saxiixday ciyaartooy dhowr ah anigoon la hadlin. ”
Ross Barkley Biography - Xogta Wiki
Name Full Ross Barkley
naaneys Ross the Boss
Taariikhda Dhalashada 5-ta Diseembar 1993
Meesha dhalashada Liverpool, Boqortooyada Ingiriiska
Muujinta Goobta Kubad
Aabbaha Peter Effanga
Hooyo Diane Barkley
Walaalo N / A
saaxiibtiis Zoe Riozzi
Dhererka & Miisaanka 6 ′ 1 ″, 87kg
Waad ku mahadsantahay aqrintayada kuqoran macluumaadkeena ku saabsan taariikh nololeedka Ross Barkley. Ugu Lifebogger, diiradayadu waxay ku wajahan tahay gudbinta sheekooyinka carruurnimada iyo xaqiiqooyinka taariikh nololeed leh caddaalad iyo saxnaan. Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto ama aad isticmaasho sanduuqa faallada si aad uga warbixiso wax kasta oo u qumman qodobkaan.